बुटवल, ३ फागुन । प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदभार ग्रहण गरेको एक बर्ष पुगेको छ । गत फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै नेकपाका नेता शंकर पोखरेलले पाँच नम्बर प्रदेश सरकारको नेतृत्व शुरु गरेका थिए ।
त्यहि दिनलाई प्रदेश स्थापना दिवस मान्दै प्रदेश नंं ५ ले स्थापना दिवस मनाएको छ । स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नम्बर पांचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेपाल बनेन भनेर चिन्ता नर्गन आग्रह गरेका छन् । प्रदेश नम्बर पांचको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित समारोलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल बन्दै गरेको बताए । भौतिक श्रोत साधनको अभावमा पनि प्रदेश पांचको सरकार सफल उन्मुख रहेको बताए । संघीयताको प्रमुख आधारमा प्रदेश सरकार अगाडी बढेको उल्लेख गर्दै यो वर्ष संघीयताको पाउण्डेशन वर्ष भएको बताए । संघीयताले खर्च नबढाएको दावी गर्दै उनले संघीयताले जनताको जीवनस्तर उकासेको र खर्च घटाएको दावी गरे । प्रदेश पांचको सरकार खोज्ने र देखिने अवस्थामा पुगेको बताउंदै जनताको मख्यमन्त्री पोखरेलल प्रदेश सरकार जिम्मेवारीका साथ अगाडी बढेको बताए । उनले जनताको जीवन स्तरसंग शान्ति र सम्वृद्वि जाड्ने गरी प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधि बढाएको बताए । अर्को वर्ष देखिने गरी विकासले सफलता हासिल गर्ने बताउंदै मुसख्यमन्त्री पोखरेलले भने अहिले सबै विकासका कामहरुका फाउण्डेशनहरु तयार हुंदै गरेको बताए ।
उनले हिमाल, पहाड र तराइसंग जोडिएको प्रदेश पांच मिनी नेपालको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै यो प्रदेशको सम्वृद्विले सम्रग देशको सम्वृद्वि हुने बताए । लुम्बिनीलाई आम जनताको जीवनसंग जोडेर विकासका लागि प्रदेश सरिकार जिम्मेवारका साथ अगाडी बढेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई छ । औपचारिक कार्यक्रम पुर्व बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बाट विभिन्न झाकी सहितको ¥याली निकालिएको थियो ।
एक बर्षः न नाम, न काम
प्रदेश नं. ५ को पहिलो वर्ष सकिदा सम्म योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । समृद्धि प्रदेश खुसी जनता को नारा दिएर गठन भएको प्रदेश नं. ५ सरकारको एक बर्ष पुरा भएको छ । यस बचिमा प्रदेश सभा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण हुन सकेको छैन भने बजेट कार्यान्वयनको अवस्था समेत निकै कमजोर छ । दुई बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारको पहिलो वर्ष भने त्यति उपलब्धीपूर्ण देखिएको छैन । योजना निर्माणको चर्चा धेरै र काम नगन्य भएको छ । सरकारले भने प्रदेश विकासको आधार तयार भएको दाबि गरेको छ । एक वर्षमा १६ वटा कानुन निर्माण मात्रै भएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम र स्मार्ट कृषि गाँउ निर्माण कार्यक्रम प्रदेशका मुख्य काम हुन् ।
दुई वटा बजेट ल्याएको प्रदेशको पहिलो बजेट कार्यान्वयन बिनै आर्थिक वर्ष बितेको थियो । शुन्यबाट संरचनाबाट शुरु भएको प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा बिताएको छ । बजेट खर्च समेत अधिकांश कार्यालय व्यवस्थापनमै भएको हो । प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकबाट स्थानीय तहसंगको समन्वयात्मक काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ । तर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु प्रदेश र संघको कार्यशैली प्रति सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले पहिलो वर्षमा लिनुपर्ने गति नलिएको धेरैको बुझाई छ । प्रतिपक्षी दलले सरकारले कामै नगरेको दाबि गदै आएको छ । “सरकारले देखिने काम गरी काम गर्नुपथ्यो, तर त्यस्तो छैन, सवै शुन्य छ” प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदिय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले भने ।
प्रदेश सभा र प्रदेश सचिवालयले खरिद गरेको सवारी साधनमा ५७ लाख बढि अनियमितता हुनु प्रदेश सरकारका लागि पहिलो गासमै ढुंगा लागे जस्तो भएको छ । दुई तिहाई भएको प्रदेश सरकारले नागरिकका अपेक्षा अनुसार काम नगरेको बुझाई आम नागरिकमा छ ।
प्रदेश सरकारले एक बर्षको कार्यकाललाई स्वर्णिम बर्ष मानेपनि यहि रफ्तारमा सरकारले काम कारबाही अगाडि बढाए यो चार बर्ष यतिकै वित्ने निश्चित छ । त्यसैले आम नागरिकका अपेक्षा अनुसार सरकारले देखिने गरी काम गर्ने कि ?